Al-shabaab oo Weerar Culus ku qaadday xero Ciidan oo ay Leedahay Dowladda Somalia – Radio Daljir
Juunyo 21, 2015 2:35 b 0
Axad, Juun 21, 2015 (Daljir) â€” Ugu yaraan shan qof oo Mid kamid ah uu yahay Askari ka tirsan Dowladda Soomaaliya Labada kalena ay ka tirsan yihiin Kooxda Al Shabab ayaa ku geeriyooday Weerar Culus oo saakay lala beegsaday Iskuul lagu tababaro Ciidamadda Sirdoonka Soomaaliya.
Weerarka ayaa ku bilawday Qarax loo adeegsaday gaari nooca Noohada waxana Markasi xigay Israsaaseen Xoogan oo dhexmartay Kooxdii Weerarka Soo qaaday iyo Ciidamadda Nabad Sugida Soomaaliya.
Dad deegaanka ayaa sheegaya in Khasaaro badan uu jiro Balse Heyâ€™adda Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay iney soo bandhigi doonaan khasaaraha Weerarka.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banadir Cabdifatax Cumar Xalane ayaa warbaahinta u sheegay in Weerarka Dowladda uu kaga dhintay Hal Askari halka Al Shababna ay kaga geeriyoodeen laba Dagaalame.
â€œQaraxu wuxuu ahaa mid xooggan, waxaana xigtay rasaas culus oo socotay muddo dhowr daqiiqadood ah, mana jirto cid gurigeeda ka bixi kartay xilligaas rasaasta oo si aad ah u dhacaysay awgeedâ€¦ balse waxaan fursad u helnay inay soo baxno markii uu dhammaaday dagaalka,â€ ayuu yiri Cismaan Nuur oo ka mid ah dadweynaha ku nool degmada Shibbis.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Somalia Maxamed Yuusuf oo isagana ka hadlay weerarka ayaa sheegay in saddex xubnood laga dilay xoogaggii Al-shabaab, isagoo aan sheegin khasaaraha dhankooda soo gaaray.
â€œSaddex ka mid ah ayaa lagu dilay weerarka, midkood wuxuu ahaa qofkii waday gaariga Ismiidaamiyay, labada kalena waxaa la toogtay iyago isku dayaya inay gudaha u galaan xarunta lagu tababaro ciidamada,â€ ayuu yiri Maxamed Yuusuf.